पेट बढ्यो तनाब नलिनुहोस | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
पेट बढ्यो तनाब नलिनुहोस
प्रकाशित मिति २ बैशाख २०७६, सोमबार ०७:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । प्रविधि तथा अन्य सुविधाका कारण मानिसहरुमा मोटोपनको समस्याले खुबै सताउन थालेको छ । भर्खरका युवाहरुको पनि अन्य सबै भाग फिट भएतापनि पेट भने पुत्लुक्क बाहिर निस्किएको हुन्छ । हुन त घरमा आमाबाबा छोरो या छोरी मोटाए भनेर खुशि हुँदाहुन् तर यसले बिभिन्न प्रकारका रोगलाई समेत निम्तो दिन्छ ।
त्यसैले पेट घटाउन धेरै मानिसहरु लागिपर्न थालेका छन् । बिहानै मर्निङ वाक गर्न होस् वा योग गर्न मानिसहरु दौडिहाल्छन् । युवापुस्तामाझ त जिम जाने चलन पनि ह्वात्तै बढेको छ । त्यसो त हामीले सामान्य कुरामा ध्यान दिने हो भने पनि पुत्लुक्क निस्कने पेटलाई नियन्त्रण गर्नसक्छौं । हामीले खाने खानामा केहि परिवर्तन गर्दा हामी फिट हुनसक्छौं ।
खडेरीले मकै खेती सखाप
पाँचथर । जिल्लाको तुम्बेवा र कुम्मायक गाउँपालिकाका साथै तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाको बेसी क्षेत्रमा खडेरीले मकै उत्पादन शून्य भएको छ…
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको तयारीमा , सम्बन्ध सुधारमा मात्र केन्द्रित रहने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको शुक्रबारदेखि हुने भारत भ्रमण सम्बन्ध सुधारमा मात्र केन्द्रित रहने भएको छ । तीन दिने राजकीय…
बिदामा चलाइएका सरकारी गाडी त्यसै छाडिए, कारबाही गर्न स्पष्ट कानुन नभएको भनाइ !
काठमाडौं । सार्वजनिक बिदाका दिन चलाइएका सरकारी सवारीसाधन नियन्त्रणका लिन गृह मन्त्रालयले सक्रियता देखाए पनि कारबाहीका लागि कानुन नहुँदा त्यसै…
पुगिएला त ५८ सयमै मलेसिया ?
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीले अब ५८ सय रुपैयाँ मात्र खर्चिए पुग्ने भएको छ । नेपाल…
सरकारी सेवामा खस आर्यको आरक्षण गायव, मधेशी, जनजाति र अपांगमा पनि कम कोटा
काठमाडौं । सरकारी सेवामा खस आर्यको आरक्षण नराखि संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पारिएको छ । संविधान र निर्वाचन…
एजेन्सी । फोर्ब्स एसियाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तीन सय त्यस्ता व्यक्तिहरुको खोजी गरिरहेको छ जसलाई उसले वर्ष २०१९ का…